बजाज डोमिनार २५० खरिद गर्नेलाई विशेष समारोह बीच साँचो हस्तान्तरण - Arthasansar
सोमबार, ०५ माघ २०७७, १७ : ५९ मा प्रकाशित
हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि., बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेताद्वारा एक विशेष समारोहबीच नयाँ बजाज डोमिनार २५० खरिद गर्नेलाई साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । यही माघ २ गते ज्ञानेश्वरको एटिक रेष्टुरेन्ट भएको उक्त समारोहमा गोल्छा गु्रपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले बजाज डोमिनार २५० खरिद गर्र्ने महानुभावहरुलाई साँचो, राइडिङ ब्याग र हेल्मेट रहेको गिप्mट ह्याम्पर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
साथै उक्त समारोहमा नै डोमिनार डेस्टिनेशनको पनिजानकारी दिइयो । डोमिनार डेस्टिनेशनको पहिलो इभेन्टमा सहभागी हुनकालागि बजाज डोमिनार २५० खरिद गर्न ईच्छुक महानुभवहरुले अनलाइन फर्म भरि टेकुको बजाज शोरुममा बुझाउनु पर्नेछ । लक्की ड्रबाट छानिएका महानुभावहरुले यही माघ १० गते हुने डोमिनार डेस्टिनेशनको पहिलो इभेन्टमा सुकुटेसम्मको रोमाञ्चक फ्रि राइडमा सहभागी हुने मौका प्राप्त गर्ने छन् ।
सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट, कति पुग्यो तोलाको ?
ह्वातै घट्यो अदुवाको मूल्य, किसान निरासा
भिड बढेपछि भृकुटीमण्डपको जुत्ताचप्पल मेला दुई सातालाई थप, ५० प्रतिशत छुटमा किन्ने मौका अझै